Maxaa kasoo kordhay wararka Manchester United iyo Jadon Sancho? – Gool FM
(Manchester) 06 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qiimo ka hooseeya kii xagaagii hore ay dalbatay Borussia Dortmund sanadkan ku heli karta saxiixa laacibka garabka ka ciyaara ee Jadon Sancho.
Inkastoo Dortmund ay ka caga jiideyso inay hoos u dhigto qiimaha 108 milyan oo gini oo ay dul dhigtay xiddigeeda, haddana waxay wararku sheegayaan inay Man United 81.5 milyan oo gini ku dhammeystiri karto saxiixa Sancho.
Maamulka Red Devils ayaa ku adkeysanaya inay xagaagan gacanta ku dhigaan xiddiga reer England maadaama uu yahay bartilmaameedka koowaad ee Macallin Ole Gunnar Solskjaer.
Macallinka reer Norway ayaa baadi goob ugu jira xiddig garabka ka ciyaara oo fursado badan abuuri karana sidoo kalena ka qayb qaadan kara weerarka, sidaas darteed, laacibka Borussia Dortmund ayaa ah xiddiga ay kooxda Ingiriiska ah awooddeeda isugu geyn doonto xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, Sportsmail ayaa sida ay sheegtay fahansan in xiriirka ka dhexeeya labada naadi uu aad u wanaagsanaaday tan iyo sanadkii hore marka ay isku fahmi waayeen saxiixa 21-jirka garabka ka ciyaara, sidaas darteedna xagaagan ay isku fahmi karaan qiimo ka jaban midkii ay xagaagii hore ku kala tageen.